निकै उतार चढावमा महत्वपूर्ण निर्णय कसरी लिने ? जान्नुहोस ६ सुत्र | newdnn.com
निकै उतार चढावमा महत्वपूर्ण निर्णय कसरी लिने ? जान्नुहोस ६ सुत्र
२०,शनिबार १८:४८ Sangita Rai
जीवनमा उतार चढाव आइरहन्छन् । कसैले चाहेर पनि सधै शान्ति र अमनचयन प्राप्त गरिरहन सक्दैन् । तर यदि विवेक भएको व्यक्ति छ भने उसले कहिल्यै गलत समयमा पनि सही निर्णय लिन चुक्दैन् ।
हामी यहाँ यही कुरा गर्दैछौँ की, जीवनमा आउने उतार चढावलाई कसरी उत्कृष्ट काम गर्न महत्वपूर्ण निर्णय लिने ? यो अति आवश्यकीय कुराका ६ सुत्र छन् ।
नेताहरूले आफूलाई कसरी फाइदा उठाउँछन् । विशेष गरी क्षेत्रमा राम्रो निर्णय गर्ने । समूह इनपुट सर्वोत्तम निर्णयका लागि अत्यन्तै बहुमूल्य छ । तथापि, ओभरफॉफले नेतालाई जाने सोलार हुन सक्छ जब उनीहरूले सोचेका छन् । उनीहरूले तिनीहरूलाई सूट गरे। यो सामान्यतया नेतृत्वको कार्यकारी क्षमतामा अन्य आत्मविश्वासको कष्ट बढ्छ।
सुत्र १ : समय जस्तोसुकै होस, निर्णय उत्कृष्ट गर्नुपर्छ
सर्वोच्च स्तरमा निर्णय गरिएका निर्णय सधैं संगठनको लागि उत्तम निर्णयहरू छैनन्। जब यो हुन्छ, समस्याहरू हल हुदैनन् । तिनीहरू अस्थायी रूपमा स्थगित हुन्छन्। यदि यो व्यक्ति मन मनपराएका विचारधाराहरूसँग घनिष्ठ छ भने त्यसोभए राम्रो निर्णयको भ्रमले उनीहरूको सान्त्वनाको साथ सान्त्वनाको भावनालाई परास्त पार्न सक्छ।
सुत्र २ : आफ्नो निर्णयमा समर्थन होइन, आवश्यकता खोज्नुस
एक राम्रो तत्व जो राम्रो निर्णय गर्न को लागी एकाधिक कोणबाट एक मुद्दा देख्न को लागी हो। यसबाहेक, स्वीकृत मानदण्डहरूबाट कुनै पनि विचलन छैन, विचारको विविधता र कुनै मतभेद छैन। यो स्वचालित रूपमा हुन्छ, न त यो हाम्रो प्राकृतिक प्रवृत्ति हो। यो प्राविधिक रुपमा निर्मित तंत्रिका साथ हुनुपर्छ जुन एक भन्दा बढी परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित गर्दछ। यसले रचनात्मक समाधानहरू बढाउँछ।
अब्राहम लिंकन व्यक्तिगत आक्रमणका साथ भराइएको प्रतियोगिताको मुख्य प्रहारको आश्चर्यचकित विजेता थियो र कप्तान डेट्स को प्रयास गर्यो। लिंकन जीता र त्यसपछि सबैले आश्चर्यचकित गरे। उहाँले धेरै मानिसहरूलाई उहाँले आफ्नो कैबिनेटमा लडाइँ राख्नुभयो। उनले उनलाई प्रतिद्वंद्वियों को आफ्नो टीम बुलाया। उनीहरूले विभिन्न दृष्टिकोण र तनाव(भरिएको समाधान प्रदान गरेका हुन् जसले हाई ह्यान समूहको लिङ्कबाट टाढा राखेका छन जसले धेरै राष्ट्रपति राष्ट्रपति अलमारियाँ चिन्ह लगाउँछन्।
अब, तपाईं प्रतिद्वंद्वहरू आफ्नो टीममा राख्न सक्नुहुन्न, तर लिंकनको राम्रो तरिकाले लिइएको छ। नयाँ विचारहरू परिमार्जन गर्न र पुरानो धारणाहरू चुनौती गर्न आवश्यक रचनात्मक तनाव उत्पन्न गर्न को लागी सही रचनात्मक घर्षण हुन आवश्यक छ।
एक राम्रो नेता उबलने बिन्दुलाई थाहा हुनेछ ताकि तनाव अधिक ओभरबियरिंग वा टीम पिघ्न सक्दैन।
यहाँ वास्तविक खतरा होस् समूहहरूमा छलफल छिट्टै बन्द गर्न सकिन्छ, बिना अनियमित दबाबले त्यस निर्णयमा काम नगरेको बिना काम गर्नका लागि। परिणाम सुची निष्पादन हो जसले अर्को डोमिनोलाई हिंड्छ, जहाँ नेताहरू अब माइक्रोम्यानज र म्यान्डेटको आवश्यकता पर्छन्।
संस्थाहरूले तिनीहरूको निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ जुन तिनीहरूको सर्वोत्तम सम्पत्ति प्रयोग गर्दछ। यसो गर्दा, कार्यकारीले अब साँच्चै टोलीमा सबैलाई नेतृत्व गर्दैछ।
सुत्र ३ : पुराना अनुभवलाई रिसाइकल गर्नुहोस
यसले पहिले काम गरेन, तर यसको मतलब यो होइन फेरि प्रयास गर्न हुँदैन। सायद हालको परिवर्तन र केहि अनुकूलन संग यो राम्रो काम गर्न सक्छ।
सुत्र ४ : कहिल्यै आत्तिएर छिटो सक्ने भनेर निर्णय नलिनुहोस
भीड नगर्नुहोस् यसले तपाईंलाई सही प्रश्न सोध्नबाट रोक्न सक्छ। विस्तारको लागि एक समय छ, तर द्रुत निर्णय सधैं राम्रो छैन। यदि तपाइँलाई अनावश्यक छ महसुस गर्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस् कि यसले के प्रभाव पार्छ। किन रौतहट के हामी थप अनुसन्धान र आगत अनुमति दिन सक्षम छौं ?
सुत्र ५ : सधै एउटै विचार र विश्वास राख्नुहोस तर सोच भिन्न बनाईराख्नुहोस
नियन्त्रणको लागि कुनै आवश्यकता छैन। छलफलमा शासन गर्दछन्। नेतृत्व समाधानमा फोकस नगर्नुहोस् कि वैकल्पिक समाधानको स्वागत गर्दछ। एक संस्कृति विकास गर्नुहोस् जसले बहु दृष्टिकोणलाई मान्दछ। ढोकामा जाँच गरिनु पर्छ, र घनिष्ठ विचार व्यक्तिगत आक्रमणहरू होइनन्।
यो गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका स्पष्ट प्रश्नहरू सोधेर हो। तिनीहरूलाई थाहा छ तपाईंले तिनीहरूलाई सुन्नुभयो, र उनीहरूको सोचमा गहिरो लिनुहोस्।
सुत्र ६ : सही जानकारी खोज्नुहोस्, अधिक होइन
उत्तम समाधान समस्या को परिभाषित अधिक समय खर्च गरेर आउँछ। समस्या स्पष्ट गर्दै, लक्ष्य वा उद्देश्य जानकारी खोज क्रिस्टल गर्दछ।
हामी कहिलेकाहीं धेरै निर्णय गर्न सक्छौं। कहिलेकाहिँ राम्रो निर्णय पछि एक राम्रो निर्णय पछि भन्दा राम्रो छ। यो आजको छिटो संसारमा सम्झन आवश्यक छ।
जब निर्णय गर्ने निर्णय हुन्छ, प्रभावकारी नेताहरूले नियन्त्रणमा लिने बेला जान्दछन्। तिनीहरू प्रतिनिधि र अरूलाई भरोसा राख्छन्। उनीहरूले उनीहरूको टोलीका सफलताहरू उनीहरूको आफ्नै नेतृत्व क्षमताहरू उत्प्रेरित गर्ने तरिकाको रूपमा हेर्छन्।